Ikhabhathi epholileyo kwiiNtaba zeColorado Rocky
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSmith Fork
Yonwabela ubuhle beNtaba yeRocky yakudala, kunye nokuchukumisa ubunewunewu be-rustic. Relax kwaye uphumle kwigumbi lokuhlala elipholileyo. Ibonisa isilingi evalekileyo, i-antler chandelier kunye nesitovu segesi/sogodo. IKhabhinethi ye-Oak inamagumbi okulala amabini; enye inomandlalo oyindlovukazi, enye inokumkani. UXOLO, AKUKHO IKHISHI OKANYE UKUPHEKISWA KWALOLUPHI UHLOBO KULE CABIN. Kodwa inefriji encinci yokulala kunye neKeurig. Igumbi lokuhlambela lineshawari enkulu enethayile zesileyiti. Idekhi ejonge empuma iyalela iimbono ezimangalisayo phezulu kweSmith Fork.
Sinamachibi amahlanu okuloba kunye neekhilomitha ezi-2 zoMlambo i-Smithfork ukuloba okanye ukuphumla nje kwaye sibe nepikiniki kwenye yeetafile ezininzi zepikiniki ezisasazeke kuyo yonke ifama yeehektare ezingama-250 onokufikelela kuzo kunye neekhilomitha zokunyuka intaba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. Kwakhona fikelela kwiindlela zejeep eGunnison National Forest
Indawo kaSmith Fork iseCrawford, Colorado, eUnited States.
I-Smith Fork Ranch kunye neMountain House zikwiCrawford, eColorado kwi-Western Slope. Idolophu yaseCrawford bubuhle obuphezulu boMntla weFork Valley. ICrawford lisango eliya kuMntla Rim weBlack Canyon yePaki yeSizwe yaseGunnison ebonelela ngemisebenzi emininzi yangaphandle efana nokuhamba ngekhephu, ukuhamba ngekhephu kunye nokunqumla ilizwe lokutyibiliza ebusika kunye nokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokufota ehlotyeni. Ndwendwela iCrawford State Park ngeminye imidlalo emininzi yangaphandle, kubandakanya ukukhwela intaba, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela isikhephe… uluhlu luyaqhubeka!
Umbuki zindwendwe ngu- Smith Fork
Le propati ikuleyaSmith Fork Ranch kwaye isingathe uMphathi wePropati kwisiza, uRon
Uyakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo
USmith Fork yi-Superhost